Tottenham Oo Guushii Ugu Horreysay Ee Ay Geggida Wembley ku Gaadho ku ciqaabtay Bournemout | Himilo Media Group
Tottenham ayaa hoosta ka xariiqday guushii ugu horeysay horyaalka ee ay ku gaadhaan geggida Wembley iyadoo Christian Eriksen goolkii guusha ee uu saxeexay qaybtii dambe ku karbaashtay Bournemouth.
Iyadoo dhibcihii ugu badnaa ku urursatay afartii ciyaarood ee ay Horyaalka ku yeesheen xili ciyaareedkan, waxaanay ahayd guushii koobaad ee afartii kulan ee u dambeeyey ee ay ku ciyaaraab garoonka Wembley oo ay si ku meel gaadh ah u sii isticmaalayaan.
Ciyaaryahanada difaaca kooxda Bournemouth ayaa sutida u qabtay Tottenham qaybtii hore, laakiin Eriksen ayaa naadiga martida loo ahaa si deg-deg ah ugu soo celiyey hogaaminta ciyaarta.
Jermain Defoe ayaa ku sigtay inuu goolka barbar dhaca ah ka dhaliyo kooxdiisii hore, kadib markii uu kursiga kaydka ka soo kacay, laakiin Hugo LIoris ayaa kubadii daciifka ahayd ee uu soo ganay isaga maray.
Wuxuu ahaa kabtanka kooxda Tottenham- Lloris ciyaaryahanka khatartii labaad ee ugu adkayd ciyaarta laga badbaadiyey kadib markii uu Eric Dier dirqi ugu sigtay inuu isla shabaqa kooxdiisa ku shubo koorne ay soo laagteen ciyaaryahanada Bournemouth qaybtii hore.
Asmir Begovic ayaa si dhaw u ilaalinayay ilaa dhamaadkiina aan cagta cagta uga qaadin Harry Kane oo ahaa mid khalkhalsan ciyaarta oo dhan.